Mitsivalana: Sary marani-tsaina sy mifampiresaka | Martech Zone
Alakamisy Janoary 10, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ahoana raha afaka mandefa sary amin'ny tranokalanao na bilaoginao ianao, manao azy ireo hifaneraserana, ary manana ny fampiasana sy ny tagging miaraka aminy rehefa maka tahaka azy ireo avy amin'ny tranokalanao izy ireo ary tehirizina amin'ny hafa? Azonao atao izany izao Mikatso. Ny Stipple dia mamela ny mombamomba ny fampiasana amin'ny alàlan'ny Analytics fonosana. Alefaso ny sary eto ambany raha hijery ny fihetsik'i Stipple!
Azonao atao ny mahita ireo tagy mifampiditra izay nampiana an'ity sarin'ny biraonay ity - ny sarintany, Facebook, Twitter, ary na dia ny tag fiantsenana ahafahanao mividy ny bokiko aza. Ny iray amin'ireo zavatra inoako fa azo ampiasaina amin'ny fomba mahomby i Stipple raha ny fahitany ny marketing dia ny famoahana infografika! Ny fananana fahaizana manampy ny callouts ary manaraka ny fampiasana infografika dia tena manampy amin'ny rafitra rehetra.
Maimaimpoana ny motera fanoratana sy fitantanana ary apetraka ho fampiharana fizarana sosialy.
Ity misy topy topin-tsary momba ny teknolojia:
Mikatso dia manana plugins namboarina ho an'ny WordPress sy ireo rafitra fitantanana atiny hafa mba hampifanarahana sy hamoahana ireo sary avy amin'ny bilaoginao.
Stipple dia hampiasaina amin'ny sary avy ao amin'ny Loka Movie Choice an'ny mpitsikera. Miara-miasa amin'ny OLONA, ireo mpankafy dia afaka mizaha sy miantsena ny 'Films and Fashions' amin'ilay karipetra mena Ny fandrakofan'ny PEOPLE.com ny loka ho an'ny sarimihetsika Critics 'Choice Movie. Ny haitao mifandraika amin'i Stipple dia ahafahan'ny mpankafy mianatra bebe kokoa momba ny kintana, ny sarimihetsika, ary ny fombany. Ny loka Critics 'Choice Movie dia hotontosaina amin'ny Alakamisy 10 Janoary amin'ny 8 alina EST. Ny fampisehoana mialoha ny karipetra mena dia manomboka amin'ny 6 hariva EST.
Tags: sary fanadihadianasary calloutsfametahana saryfampiasana sarymitsivalana
Ny tantaran'ny teknolojia fivarotana